Edson-Yintoni engenakwenzeka kuwe-ukubala usiya eBukumkanini
U-Queen wethu u-Queen weRosari noXolo	Edson Glauber ngo-Okthobha 12, 2020:
Bantwana bam, ndivela ezulwini ukuzokucela ukuba nithandaze iRosari eNgcwele ngokuqhubekayo ukulungelwa kweBrazil noluntu lonke. NgeRosari unokufumana ubabalo oluninzi oluvela entliziyweni yonyana wam, ofuna kakhulu ukusikelela nokukunceda. NgeRosari ethandaze kakuhle kwaye ngothando, uNyana wam akanakukukhanyela nantoni na. Thembela, kholelwa kumandla omthandazo, kwisimo sokuba uNyana wam akuve kwaye akunike nobabalo olungenakwenzeka. UNyana wam angazenza zonke izinto kuba eluthando kwaye nothando lwakhe alunasiphelo, kuba ungunaphakade. Kwelona xesha linzima ebomini bakho, uthwele owona mnqamlezo unzima, yitsho ngokuzithemba: "Yesu, ndiyathemba wena", kwaye yonke into izakutshintsha, kuba uya kuba namandla noxolo, aya kukunika. Ndiyanisikelela nonke: egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen!
← UAngela - Funda iLizwi likaThixo
Kufuphi noYesu →